China Valve Parts orinasa sy mpanamboatra | Metaly sy teknika
Miaraka amin'ny orinasa miorina amin'ny orinasa 2 feno ary manana mpiara-miasa mpanohana maharitra maharitra mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny famokarana casting (amin'ny fizotran'ny fitaovana & fanodinana maro samihafa), ny fametahana ny masinina ary ny fanakona ny tany sns …… Miaraka amin'ny politika fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny governemanta China. , nanangana vola 20 tapitrisa RMB hafa izahay hanatsarana ny fananganana fotodrafitrasa.
Miaraka amin'ny vokatra maherin'ny 30 taona manondrana traikefa / ekipa avo lenta ary ekipa QA teknika henjana / mivoatra miaraka amin'ny mpanjifa ary miara-mitombo ny foto-kevitra, mahatratra fiaraha-miasa mandresy izahay ary mahazo laza tsara eo amin'ny tsena manerantany.
Mombamomba ny vokatra : Pump & Valve Casting Parts
. ny Pump & Valve Casting Parts natolotra ho an'ny firenena eropeana ho OEM na aorian'ny faritra an-tsena mandritra ny 30 taona mahery ary hahazo laza tsara miaraka amin'ny fifehezana tsara ny kalitao tsy tapaka, fandefasana ara-potoana, vidiny mirary.
Cast vy, vy mulaka, vy firaka, vy karbonika, vy firaka, vy vy, varahina, alimo, aliminioma, ……
–Fandefasana casting ampiasainay: fanariana fasika maintso, fanariana fasika resin, fanariana bobongolo akorandriaka, fanariana fampiasam-bola (fanariana rano-fitaratra, fanariana silika sol, fanariana sombin-javatra very), bobongolo maharitra, fanariana maty, tsipika famolavolana fiara, sns…. .
Fanariana vy sy volafotsy vy: 6000-10,000mts / taona
Casting vy: 3.000MT / taona.
Fanariana vy tsy misy fangarony: 800 MTS / taona
Fanariana vy tsy ferrous:
Varahina, varahina ary varahina Nickel: 400 MTS / taona
Aluminium: 500 MTS / taona
Fitaovana SPECTROMAXX, / Spectrographie 2D Vedio fandrefesana / Rough metatra 、 Altimetre / Fitsapana mafy / Fitsapana / CMM
Fitaovana fandrefesana sy fandrefesana dia zahan'ny biraon'ny manam-pahaizana manokana isan-kerinandro.
Misy IPQC insp mpanara-maso filaharana ary fanaraha-maso farany hifehezana ny kalitao.
Azontsika antoka fa ny vokatra avo lenta sy ny serivisy tsara dia hanintona ny fankasitrahan'ny mpanjifa bebe kokoa. Ny fifandraisana aminay no dingana voalohany hananganana fifandraisana ara-barotra mahomby miaraka aminay. Raha liana amin'ny iray aminay izahay, azafady mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay atsy ho atsy.
Manaraka: Fiara manaparitaka faritra
Sombin'ny valizy lolo
Fizarana valve vavahady